प्रदेश - Gorkhapatra | Nepal's First News Organization
मुना हमालसुर्खेत, जेठ ३ गते । चिङ्गाड गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका बोधविक्रम जिसी र उपाध्यक्षमा मिनाकुमारी रोकाय विजयी हुनुभएको हो । अध्यक्षमा जिसिले तीन हजार ५९१ मत ल्याउनु भएको छ । उहाँका प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका डोरप्रसाद शर्माले तीन हजार ५३० मत ल्याउनुभयो । यस्तै उपाध्यक्ष रोकायले तीन हजार ५८१ मत ल्याउनुभएको छ । उहाँका प्रतिष्पर्धी काँग्रेसका मनमाया आचार्यले तीन हजार ४६९ मत ल्याएर पराजित हुनुभयो । छ वटा पालिका रहेको सो गाउँपालिकामा एमाले र काँग्रेसले तीन तीन वटामा जित हासिल गरेका छन् । वडा नं १ मा एमालेका टेकबहादुर रजाली विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ६८२ मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभयो । वडा नं ४ मा एमालेका टेकबहादुर रानाले ६०१ मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको छ । वडा नं ५ मा एमालेकै लालबहादुर जिसीले ५३० मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको छ । यस्तै, वडा नं २ मा काँग्रेसका प्रेमबहादुर खड्का विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ६९५ मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभयो । वडा नं ३ मा काँग्रेसकै वीरबहादुर जिसीले ७२१ मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभयो । यस्तै, वडा नं ६ मा काँग्रेसका भिमबहादुर बुढाले ५१४ मत ल्याएर वडा अध्यक्ष विजयी हुनुभयो ।
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा(एमाले)का कर्ण कुँबर विजयी हुनुभएको छ । कुँबरले गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर कठरियालाई एकहजार ६५६ मतले पछाडि पार्दै विजयी हुनुभएको हो ।
कैलालीको बर्दगोरिया अध्यक्षमा एमालेका कुँवर विजयी
अविनाश चौधरीधनगढी, जेठ ३ गते । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का कर्ण कुँवर विजयी हुनुभएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार शेरबहादुर कठरियालाई एक हजार ६५६ मतान्तरले पराजित गरी उहाँ अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको हो । विजयी कुँवरले पाँच हजार ४८२ र पराजित हुनुभएका कठरियाले चार हजार १८६ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपाध्यक्षमा भने गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार गणेशराज गिरि चार हजार ५६९ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभयो । उहाँले नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार इन्दु कठरियालाई ३१४ मतान्तरले पराजित गर्नुभयो । पराजित हुनु भएकी कठरियाले चार हजार २५५ मत प्राप्त गर्नुभयो । सो पालिकामा जम्मा १४ हजार ९४३ मत खसेको थियो ।
जाजरकोटमा काँग्रेस दुई र माओबादी केन्द्र एकमा बिजयी
वासुदेव शर्मा जाजरकोट, जेठ ३ गते । जाजरकोटको कुशे, शिवालय गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस, नलगाड नगरपालिकामा माओबादी केन्द्रका उम्मेदवारले पालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएका छन् । कुशे गाउँपालिकामा काँग्रेसका उम्मेदवार हरिचन्द्र वस्नेत, शिबालय गाउँपालिकामा शेरबहादुर शाही, नलगाड नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नबिन रावत बिजय हुनुभएको हो । २०७४ को स्थानिय तहको निर्वाचनमा बिजय भएका बस्नेत पुन ः अध्यक्षमाा निर्वाचित हुनुभएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार एकीकृत समाजबादीका तप्तबहादुर हमाललाई पराजित गर्दै बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ । उपाध्यक्षमा काँग्रेसका उम्मेदवार देवीका सिह बिजय हुनुभएको छ । मत गणनाको अन्तिम मत परिणामअनुसार बस्नेतले तीन हजार ४ सय २३ मत प्राप्त गरी पालिकाको अध्यक्षमा विजय हुनु भएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजबादीका हमालले ३ हजार १ सय ८२ मत प्राप्त गरी पराजित हुनुभयो । त्यसैगरी उपाध्यक्षमा काँग्रेसबाट देवीका सिहले ३ हजार पाँच सय ८७ मत प्राप्त गरि बिजय हुनु भएको छ भने उहाँका निवकटतम प्रतिस्पर्धी माओबादी केन्द्रका बिकास रोकाय २ हजार नौ सय १८ मत प्राप्त गर्नुभयो । शिवालय गाउँपालिकामा काँग्रेसका शेरबहादुर शाहीले ३ हजार तीनसय तीन मत प्राप्त गरी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका रंगनाथ योगीले २ हजार सात सय १८ मत प्राप्त गरी पराजित हुनुभयो । त्यसैगरी उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी गिता शाहीले २ हजार छ सय ५९ प्राप्त गरी बिजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नैनसरा शाहीले २ हजार चार सय ३९ मत प्राप्त गर्नुभयो । नलगाड नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा माओबादी केन्द्रका नविन रावत बिजय हुनुभएको छ । उहाँले ५ हजार पाँचसय ९९ मत प्राप्त गरी बिजय हुनु भएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका धर्मबहादुर शाहीले ३ हजार ६ सय २६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । गठबन्धनबाट नगर उपप्रमुखमा काग्रेसका सरिता सिहले ५ हजार चारसय ६ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सुनिता बोहराले ३ हजार तीन सय ९३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । अन्य भेरी नगरपालिकाको मत गणना जारी छ । नेकपा (एमाले) का चन्द्रप्रकास घर्र्ती पुन नगर प्रमुखमा दोहोरिने बताइएको छ ।
बेलडाँडीमा गुम्यो एमालेको विरासत, काँग्रेसका राना विजयी
लक्ष्मणदत्त पन्तमहेन्द्रनगर, जेठ १ गते । कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका हरिशचन्द्र राना निर्वाचित हुनु भएको छ । एमालेले जित्ने गरेको उक्त पालिकामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका अकल बहादुर बिष्टलाई १ हजार ८०२ मत अन्तरले पराजित गर्दै काँग्रेसका राना अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो ।२०५४ र ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले अध्यक्षसहित राम्रो उपस्थिति जनाएको छ । ०७४ को चुनाउमा ५ वडा रहेको उक्त पालिकामा एमालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित चारवटा वडा जितेको थियो । यस पटक भने एमाले एक वडामा सिमित हुन पुगेको हो ।निर्वाचित अध्यक्ष रानाले ४ हजार १०३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका अकल बहादुर बिष्टले २ हजार ३०१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ईश्वरी दत्त भट्टले १ हजार ७६३, राप्रपाका प्रेम सिंह साउँदले २६७ र स्वतन्त्र उम्मेदवार एकेन्द्र शाहले ३० मत प्राप्त गर्नु भएको निर्वाचन अधिकृत सुरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।बेलडाँडी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका शान्ति नाथ निर्वाचित हुनु भएको छ । उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका फुलदेवी रानालाई ४४६ मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका शान्ति नाथले ३ हजार ६७३ मत प्राप्त गर्नुभयो . नेकपा एमालेका फुलदेवी रानाले ३ हजार २२७, नेकपा माओवादी केन्द्रका कल्पना गिरीले ९७१, स्वतन्त्र उम्मेदवार पुष्प कमल पण्डितले २९२ र राप्रपाका बसन्ती चौधरीले २३० मत प्राप्त गर्नुभयो । बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ५ मा नेपाली काँग्रेस तथा वडा नम्बर ४ मा नेकपा एमालेको पुरै प्यानल निर्वाचित भएको बेलडाँडीका निर्वाचन अधिकृत केसीले बताउनुभयो ।
मदाने गाउँपालिकामा कांग्रेसका महेन्द्रबहादुर कुँवर विजयी
तिलाचन पाण्डेतम्घास, जेठ २ गते । जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट कांग्रेसका महेन्द्रबहादुर कुँवर विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ४ हजार ७०७ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका प्रेम केशीले ४ हजार २११ मत ल्याउनुभएको हो ।यस्तै, उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी सरिता खड्का विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ४ हजार ५६७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका बेगमबहादुर चन्दले ४ हजार २११ मत ल्याउनुभएको हो । उपाध्यक्ष सरिता खड्का यस अगाडी पनि उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो ।
मतगणना स्थलमा विवाद भएपछि प्रहरीद्वारा हवाई फायर
लक्ष्मी चौधरीजनकपुरधाम, जेठ २ गते । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा मतगणना क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ । धनौजी वडा १ को लखौरी गाउँको मतगणनाका क्रममा मतपत्र बढी देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको स्थानीयले बताएका छन् । विवादले उग्ररुप लिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक दर्जन हवाई फायर गरेको थियो । यस्तै, गाउँपालिकाको ३, ४ र ५ को मतगणना सम्पन्न हुँदा तीनै वडामा काँग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । वडा नं. १ को मतगणनामा समेत काँग्रेसकै अग्रता देखिएका कारण अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले मतगणना स्थलमा विवाद उत्पन्न गरेपछि सो विवादलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको निवर्तमान गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामवती मण्डलले जानकारी दिनुभयो । मतगणना भइरहेको वडामा समेत काँग्रेसकै अग्रता देखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि काँग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएको मण्डलले बताउनुभयो । विवाद साम्य भएपछि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ । दलहरुको निर्णयअनुसार मतगणना पुनः गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यहाँको अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ ।उक्त गाउँपालिकामा वडा १ र २ मा मतगाणना हुन बाँकी छ । धनौजीमा जम्मा ५ वटा वडा छ । यसअघि पनि काँग्रेसकै अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
भलमन्साको काँधमा वडा हाँक्ने जिम्मेवारी
अविनाश चौधरीधनगढी, जेठ २ गते । कैलालीको भड्री गाउँका भलमन्सा सन्तराम चौधरीलाई वडा हाँक्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ । कैलारी गाउँपालिका–३ का वडावासीले भलमन्सा चौधरीलाई वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सुम्पेका हुन । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षकसमेत रहनु भएका चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट वडा नम्बर ३ को अध्यक्षमा आफ्नो प्यानलसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कैलाश चौधरीलाई पराजित गरेर वडा अध्यक्षमा जित हासिल गर्नुभएको हो ।विजयी हुनु भएका चौधरीले एक हजार १२ र पराजित हुनु भएका उम्मेदवारले ७४२ मत प्राप्त गर्नुभयो । यसैगरी, जोशीपुर गाउँपालिका–२ को वडा अध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका विष्णु चौधरी विजयी हुनु भएको छ । उहाँले ६४२ मत प्राप्त गर्नुभयो । यस्तै, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको वडा अध्यक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दोस्रो जित भएको छ । सो पार्टीका लालवीर चौधरी वडा नम्बर ४ को वडा अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित हुनु भएको छ । यसैगरी, गोदावरी नगरपालिका–१० को वडा अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका रविन्द्र शाही (गुड्डु) निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो ।
भिमदत्त नगरपालिकामा शुरु भएन मतगणना
लक्ष्मण पन्तमहेन्द्रनगर, जेठ २ गते । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकामा अझै मतगणना शुरु हुन सकेको छैन । वडा नं. १ को मतगणना सम्पन्न गरेर वडा नं. २ को आधा मतगणना हुँदा एक सयको बण्डलमा १ सय २० मत भेटिएपछि विवाद हुँदा आईतबार दिउँसो स्थगित गरिएको मतगणना अझै शुरु हुन नसकेको हो । पटक–पटक बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा मतगणना शुरु गर्न नसकिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मदनबहादुर धामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमती जुटेको छैन, फेरि बोलाएको छु, एकै छिनमा बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्छौ ।’
घोडाघोडी १ मा कांग्रेस, ११ मा जसपाको वडाअध्यक्ष विजयी
चाँदनी आचार्यघोडाघोडी (कैलाली), जेठ २ गते । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १ र ११ को वडा अध्यक्षको सोमबार विहान अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । १ नम्बर वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका घनश्याम ओझा विजयी हुनुभएको छ भने वडा नम्बर ११ को वडाअध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार दानसिंह जोगी विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ६७२ मत प्राप्ता गर्दै वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । जोगीको प्रतिस्पर्धीको रुपमा कांग्रेसका उम्मेदवार राजकुमार कठरियाले ६६९ मत प्राप्त गर्नुभयो । तीन मतको अन्तरले जोगी विजयी हुनुभएको छ । वडा सदस्यमा एक जना जसपाबाट र अन्य तीन जना कांग्रेसबाट विजयी हुनुभएको छ । हारे भनेर घर गएका जोगी एक्कासी जितेको खबर सामाजिक सञ्जालबाट पाएलगतै खुशी हुदै मतगणनास्थल पुग्नुभएको थियो । यसअघिको चुनावमा समेत उक्त वडामा जोगी विजयी हुनुभएको थियो । यता कांग्रेसले वडा नम्बर ११ को पुनः मतगणनाको माग राख्दै प्रदर्शन गरेको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक नहुदै कांग्रेसका उम्मेदवार कठरियाको जितको हल्ला चलेको थियो । गौरीगंगामा समाजवादी र कांग्रेसले खाता खोल्यो त्यसैगरी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा सोमवार विहान २ वटा वडाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । वडा नम्बर १ मा कांग्रेसका डबलबहादुर दियाकोटी र वडा नम्बर २ मा नेकपा समाजवादीका जनकबहादुर साउँद विजयी हुनुभएको छ ।समाजवादी र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन रहेको उक्त नगरपालिकामा साउँदले ६९३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेदवारले ६७९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । एक खुल्ला सदस्य बाहेक तीन सदस्यमा समेत समाजवादीका उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ । त्यसैगरी वडा नम्बर १ को वडा अध्यक्षमा विजयी दियाकोटीले एक हजार १३१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँको प्रतिस्पर्धीकोरुपमा रहनुभएका नेकपा एमालेका जुद्धबहादुर साउँदले ८२५ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
कैलाशमा गठबन्धनका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजयी
अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका लोकबहादुर मोक्तान र उपाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बालकुमार मल्ल विजयी हुनुभएको हो ।
भेरी ११ मा काँग्रेसबाट जैसीको प्यानल विजयी
बासुदेव शर्माजाजरकोट, जेठ २ गते । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ११ मा नेपाली काँग्रेसबाट वडा अध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद जैसीको पुरै प्यानल विजयी भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हर्कबहादुर नेपालीलाई २ मतको मतान्तरले पछि पार्दै उहाँ अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । काग्रेसका उमेदवार जैसीले ४ सय ५८ मत प्राप्त गरी विजय हुनुुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपालीले ४ सय ५७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । काग्रेसको पकड मानिएको भेरी ११ सहिद लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको भुमी हो । उता नलगाड ४ को वडा अध्यक्षमा काग्रेसबाट उमेदवार बनेका बद्री पन्तको प्यानलसहित वडा अध्यक्षमा वियजी भएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका गुमान रावललाई पराजित गर्दै पन्तको प्यानल नै विजय भएको हो । पन्तले ५ सय ४ मत प्राप्त गरी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो भने उहाँका निवकटतम प्रतिस्पर्धी गुमान रावलले ३ सय ५० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । वडा अध्यक्षमा निर्वाचित पन्त क्रियाशील पत्रकार पनि हुन् । पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाका सदस्य नेपाल टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन, रेडियो नेपालमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । सहयोगी र सरल स्वभावका धनि पन्त फराकिलो मतकासाथ वडा अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको छ ।
म्याग्दीको मंगलामा एमालेका उम्मेदवार विजयी
अमृतप्रसाद पौडेलम्याग्दी, जेठ २ गते । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ अन्तर्गत सोमबार बिहान सम्पन्न मतगणनाको घोषित अन्तिम मत परिणामअनुसार पश्चिम म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ । यसअघि आइतबार घोषणा भएको परिणामअनुसार मालिका गाउँपालिकामा पनि एमालेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितेको थियो ।मंगला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार सतप्रसाद रोकाले ३ हजार ९ सय ६८ मत ल्याएर बिजयी हुँदै गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका वीरेन्द्र बुढाथोकीले २ हजार ८ सय ५ मत पाउनुभएको छ । अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर विकले १ हजार ५ सय २१ मत पाउनुभयो । अध्यक्षमा निर्वाचित एमाले उम्मेदवार रोका मंगला गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि बिजयी हुनुभएको हो । त्यस्तै उपाध्यक्षमा पनि नेकपा एमालेकै उम्मेदवार प्रेमकुमारी क्षत्रीले ४ हजार २ सय ६१ मतसहित विजयी हुनुभएको मंगला गाउँपालिका निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उपाध्यक्षमा विजयी क्षत्रीका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी शर्मिला थापाले २ हजार ५ सय ९५ र माओवादी केन्द्रकी सुकमाया रोकाले १ हजार ३ सय ७३ मत पाएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । कुल १३ हजार ४ सय १६ मतदाता रहेको मंगलामा ८ हजार ८ सय १७ अर्थात् ६५ दशमलव ७२ प्रतिशत मत खसेको थियो । ५ वटा वडा रहेको मंगलामा निर्वाचित हुने २७ पदका लागि ९८ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मंगला गाउँपालिकाको पाँचवटा वडामध्ये तीनवटा वडामा एमाले र एक एक वडामा माओवादी र कांग्रेसको प्यानलसहित विजयी भएका छन् । मंगला १ कुहुँमा एमाले, २ बाबियाचौरमा एमाले, ३ बराङ्जामा माओवादी, ४ बराङ्जामा कांग्रेस र ५ अर्मनमा एमाले विजयी भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार बिहानै प्रकाशित निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामअनुसार रघुगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका भवबहादुर भण्डारी र प्रेमकुमारी पुन विजयी हुनुभएको छ । आइतबार प्रकाशित मतपरिणाम अनुसार पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा भने एमालेका वेगप्रसाद गर्बुजा र लक्ष्मीदेवी घर्तीमगर पुन विजयी बन्नुभएको छ । एक नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकासहित कुल ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा हालसम्म ३३ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार एमाले १६ वडा, कांग्रेस १२ र माओवादी ५ वटा वडामा विजयी भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीमा अब १२ वटा वडा एवम् धौलागिरी गाउँपालिका, अन्नपुर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको मतपरिणाम आउन बाँकी छ ।